Madaxweyne Mustafe Cagjar oo ku wajahan Addis Ababa iyo colaadii Mooyaale oo dib u soo cusboonaatay – Radio Daljir
Noofember 16, 2018 10:35 b 0
Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa kulan deg deg ah iskugu yeeray xubnaha golihiisa Wasiiradda, kulan kaas oo looga wada hadlay xaaladda ka taagan deegaanka Mooyaale, una dhaxaysa dad ka soo jeeda Deegaanka Soomaalida iyo Oromadda.
Madaxweynaha ayaa kulankan intii uu socday u sheegay golihiisa wasiiradda in loo baahan yahay in la qaato door wanaagsan oo ku aadan sidii colaadaasi loo xakameyn lahaa .
Madaxweyne Mustafe ayaa sheegay in uu ku wajahan yahay haatan magaalada Addis Ababa si arrintan xal deg deg ah looga gaaro.
Cagjar ayaa shalay galab-ba gaaray magaalada Addis Ababa, isagoo lafilayo in uu la kulmo Ra-iisulwasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ay ka wada hadlayaan sidii xal waara loogu heli lahaa dagaalka u dhaxeeya labada qowmiyadood.
Baarlamaanka Soomaaliya oo meel mariyay sharciga ajanda yaasha caafimaadka Qaranka (dhegayso)